सन्दर्भ : राष्ट्रिय योग दिवस, यस्ता छन् योगका १५ चामत्कारिक फाइदा
१ माघ काठमाडौ । राष्ट्रिय योग दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । व्यक्तिगत शान्ति र स्वास्थबिना विकास र समृद्धि सम्भव नभएको भन्दै दिवस मनाउन थालिएको हो । योग अभ्यासले मनको शान्ति, आत्मनियन्त्रण, चित्त शुद्धिकरण र अध्यात्मिकतामा ध्यान दिँदै मानव शक्ति अनि चित्तको सकारात्मक विकेन्द्रिकरणमा महत्व दिने योग गुरुले बताएका छन् । चित्त वृत्तिको निरोध नै योग हो भनेर पतञ्जलिले भनेका छन् । योगले चित्त्…विस्तृत समाचार »
​कलेजो बिग्रीएको ५ संकेत, के–के देखिन्छ लक्षण
काठमाडौं । कलेजो शरीरको छालाभन्दा दोस्रो ठूलो अंग हो । अन्य अंगहरु जस्तै कलेजो पनि शरीरको महत्त्वपूर्ण अंग हो । यसको सम्बन्ध पाचन प्रक्रियासँग हुन्छ । कलेजोले काम गर्न छोड्यो भने मानिसको मृत्यु हुन्छ । स्वस्थ मानिसको कलेजोको तौल १.३ देखि १.६ किलोग्राम हुन्छ । रातो र खैरौ रङमा हुने मानव शरीरको यो अंगले शरीरमा भएको विष वा विभिन्न रसायनलाई फिल्टर गरी पित्त उत्पादन गर्छ…विस्तृत समाचार »
सानै उमेरमा कार चलाउनेहरुकोे बढी सेक्स पार्टनर !
काठमाडौं । कार र सेक्स लाइफबीच कुनै सम्बन्ध छ ? हालै आएको एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार, यो सम्बन्ध निकै गरमागरम छ । अध्ययनमा संलग्न अनुसन्धानकर्मीहरूका अनुसार, कुनै मानिसले सानै उमेरमा कार किनेमा उसको अभिमान बढ्छ । कार उसका लागि स्टेटस सिम्बोल बन्छ र महिलालाई त्यही कुराले पनि आकर्षित गर्छ । अध्ययनका अनुसार, कम उमेरमा कार लिनेहरूको यौनेच्छा र यौनकर्मको सम्भावना दुवै बढेको हुन्छ ।मेक्सिकोमो कोलिमा…विस्तृत समाचार »
धेरै चिनी खाने नागरिक कुन देशका ?
काठमाडौं । नामचीन मेडिकल जर्नल ल्यान्सेटमा ग्लोबल बर्डन अफ डिजिजका सम्बन्धमा एउटा अध्ययन भएको थियो । उक्त रिपोर्ट प्रकाशित भएपछि इजरायलका मिडियामा धेरै सेलिब्रट गरियो । वास्तवमा, उक्त अध्ययनमा संसार भरीका एक सय ९५ देशहरुबाट संकलित स्वास्थ्य तथ्यांक समावेश गरिएको थियो । उक्त अध्ययन अनुसार इजरायल संसारको त्यस्तो देश हो, जहाँ खानपानका कारण हुने मृत्युदर सबैभन्दा कम छ । यो खबर प्रकाशित भएपछि संसारभरी त्यस्ता लेखहरु…विस्तृत समाचार »
तातोपानीले नुहाउँदा देखिन सक्छ चाउरी र बाँझोपना, अरु के के छन् बेफाइदा ?
६ पौष २०७६
काठमाडौं । हिउँद सुरु भएसँगै जाडो पनि बढिरहेको छ । जाडो बढेपछि तातोपानीको प्रयोग पनि बढ्दै जान्छ । विशेषगरी जाडोयाममा तातो पानीमा नुहाउने चलन छ । जाडो मौसममा तातोपानीमा नुहाउँदा आनन्द महसुस त हुन्छ । तर के जाडो मौसममा तातोपानीले नुहाउँदा शरीरलाई फाइदा पुग्छ त ? डाक्टरहरुका अनुसार जाडोमा तातोपानीले नुहाउँदा धेरै बेफाइदाहरु हुन सक्छन् । सुख्खापन तातोपानीले छालामा सुख्खापन पैदा गराउँछ । छालामा भएको…विस्तृत समाचार »
२९ मङ्सिर २०७६
काठमाडौं । मौसम धुम्मिएको छ । कठ्याग्रिने चिसो छ । छिटपुट पानी परेको छ । कहीँ हिमपात पनि सुरु भइसकेको छ । अब जाडो यामले छोपिसकेको छ । चिसो बढेसँगै केही स्वास्थ्य समस्या पनि देखापर्छ । साथसाथै कतिपय अवस्थामा दैनिक जीवन कष्टकर पनि बन्छ । यद्यपि यो मौसममा केही सावधानी अपनाउने हो भने आफुलाई फिट एन्ड फाइन राख्न सकिन्छ । आफ्नो दिनचर्यालाई अरु बेला झै…विस्तृत समाचार »
२२ मंसिर, काठमाडौं । हामी जति धेरै दबाबमा हुन्छौँ त्यति नै हाम्रो मानसिक क्षमतामा कमी आउँदै जान्छ । यसको अर्थ हामी गलत काममा केन्द्रित भइरहेका हुन्छौँ र अन्त्यमा आफूले चाहेको नतिजा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । प्रायः अवस्थामा मानिसहरु जुन समय अत्यधिक व्यस्ततापूर्वक काम गरिरहेका हुन्छन् त्यही दिन उनीहरुले सोचेअनुरुप काम हुँदैन जसकारण पछिसम्म पछुतोको भावना रहिरहन्छ । यस्तोमा हामी अर्को दिन केही फरक होला भन्ने…विस्तृत समाचार »
चक्कर आउने समस्या समाधानको सजिलो उपाय
काठमाडौं । टाउको घुमाउने अर्थात चक्कर आउने समस्या अधिकांशले अनुभव गरेका हुन्छन् । कसैलाई कहिले काहिँ मात्रै चक्कर आउँछ भने कोहीलाई यसले नियमित रुपमा दुःख दिएको हुन्छ । चक्कर आउने समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि ‘एप्ली मनुभर’ अर्थात टाउको विभिन्न पोजिशनमा राख्ने अभ्यास गर्न सकिन्छ । यसका लागि पहिले टाउकोलाई बायाँ तर्फ ४५ डिग्रीको कोणमा घुमाउनु पर्छ । लगत्तै उत्तानो परेर सुत्नु पर्छ र ३० सेकेण्डसम्म…विस्तृत समाचार »
पहिलोपटक मोटा व्यक्तिको फोक्सोमा बोसो जमेको पाइयो
काठमाडौं । अधिक तौल भएका र मोटा व्यक्तिहरूको फोक्सोमा पहिलो पटक बोसोजस्तो तन्तु पाइएको छ। अस्ट्रेलियाका अनुसन्धानकर्ताहरूले ५२ जना मानिसहरूको फोक्सोको विश्लेषण गरेका थिए। त्यस क्रममा शरीरको तौल अनुपातमा ती व्यक्तिहरूको फोक्सोमा बोसो बढेको पाइयो। उनीहरूले भनेका छन्– बढी तौल हुने र मोटा व्यक्तिहरूमा दमको जोखिम किन बढी हुन्छ भन्ने जवाफ यो अध्ययनबाट मिल्न सक्छ। फोक्सो विज्ञहरूले भनेका छन्– त्यस्तो जोखिम घटाउँदा कम हुन जान्छ…विस्तृत समाचार »
११ आश्विन २०७६
अहिले हामी सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छौं । त्यही माध्यामबाट हामी आफन्त, साथीभाईसँग भलाकुसारी गर्छौं । एकअर्काको हालखबर बुझ्छौं । तर, यतिमा मात्र पनि सीमित छैनौं । सामाजिक सञ्जालमा हामी यति लिप्त भएका छौं कि, मानौं त्यही नै हाम्रो संसार हो । त्यही हाम्रो खुसी हो । त्यही नै हाम्रो जीवन हो । जबकी सामाजिक सञ्जालकै कारण हामी धेरै कुरा गुमाउँदैछौं । यसले हाम्रो शारीरिक तथा…विस्तृत समाचार »